13 mai | GAZETY_ADALADALA
7 Febroary 2009: Nivarotra aina…
Posted on 07/02/2010 by gazetyavylavitra
Iza no nivarotra aina?
Fanontaniana mipetraka avy hatrany ao an-tsain’ny maro io raha vao mahita iry lohateny.
Ny 7 Febroary 2009 tokoa mantsy no Sabotsy mihoson-drà niakaran’izao fitondrana Tetezamita izao ho eo amin’ny fitantanana ny firenena.
Ny 7 Febroary 2009 izay andro nanendren’i Andry Rajoelina an’i Monja Roindefo Zafitsimivalo ho Praiminisitra avy eny amin’ny Kianjan’ny 13 mai, Analakely.
Ny 7 Febroary 2009, andro nitondrana ireo olona an’aliny hiakatra ho eny Ambohitsorohitra fa hoe hametraka an’i Monja Roindefo ho ao amin’io Lapa io, satria an’ny Fiadidiana ny Tananan’Antananarivo ny Lapa ka atolony hiasan’ny Praiminisitra vao avy notendrena.
Rehefa tonga teny Antaninarenina ireo vahoaka marobe, nanomboka ny fifampiraharahana tamin’ireo mpitandro filaminana. Nandamoka izany. Ary raha ny resaka nataon’ingahy Fano Rakotondrazaka (mpanao gazety L’Express de Madagascar – fanadihadian’ny TVM nalefa androany 7 Febroary 2010) dia niteny ireo mpitandro filaminana teo Antaninarenina (manoloana ny BOA) fa halefany hiditra any ny vahoaka rehefa manao amboletra, saingy dia efa mampiomana ry zareo fa hitifitra ny avy ao anaty Lapa. Andro nahatapahan’ny clavicule-n’ingahy Kelly (mpaka sarin’ny gazety Midi-Madagasikara) teny ampiahazakazahana handositra ny tifitra.
Nihatakataka ny mpanao gazety maro izay nandre izay fampitandremana izay, ka niandry izay hiseho no sisa natao.
Eto no hivaly ny fanontaniana mipetra ao an-tsainy maro hoe : ‘iza no nivarotra aina?’
Nivarotra aina ny mpanao gazety Malagasy sy ireo mpaka sary marobe mba hanomezana anareo mpamaky ny vaovao misy sy mitranga eny rehetra eny. Tsara ny ahalalan’ny rehetra fa tsy mba manana fiantohana toy ireo mpanao gazety vahiny tonga aty manao ny asany ny mpanao gazety Malagasy (ny azy ireny mantsy volabe tokoa no tambin’ny firotsahany an-tani’ady toy ireny), fa dia miasa noho ny fitiavana ilay asa fotsiny (na mety koa noho ny tsy fahafahana manoatra, fa tsy misy atao afa-tsy izay – miala tsiny fa toa masiaka ilay fiteniko azy)
Rehefa nirefotra ny poa-basy voalohany dia samy nitsoaka nanavotra aina sy nitady izay hialofana ny mpaka sary sy ny mpanao gazety (toy ireo olon-drehetra ihany). Betsaka ny niditra tao amin’ny Hotel Colbert tamin’izany. Ka avy ao anatiny tao no nitily sy nijery izay niseho tety ivelany ny ankamaroan’ireo mpanao gazety namana.
Fotoana fohy taorian’izay no nahatsinjovana tovolahy vitsivitsy nilanja vatana mangatsiakan’ny tovolahy iray. Tovolahy izay tsy iza fa i Ando (mpaka sary avy ao amin’ny RTA). Raha nisy kely foana dia tapaka tarangana ny tendany. Maty amperin’asa izy, Maty ‘nivarotra ny ainy’ mba hahazo vaovao, ‘nivarotra ny ainy’ mba hiavaka amin’ny maro.
Teny filamatra miafina aminay tsirairay avy tokoa mantsy (na dia any am-po tsy miloaka aza) ny hoe ‘Tsy manaiky ho gisitra‘ raha vao misy zavatra miseho, ary ‘ny hanao sy hahazo ny tsaratsara kokoa noho ny hafa‘ amin’izay hatolotra ny mpanjifany tsirairay avy.
Maro ireo maty, be ny tsy hita, tamin’ireo olona tonga teny Antaninarenina. Ireny rehetra ireny dia samy ‘nivarotra aina’ avokoa, saingy samy nanana ny antony nivarotany ny ainy.
Niompana manokana tamin’ny asa fanaovana izay hanangonana vaovao ny lahatsoratra, satria indraindray dia takon’ny zava-mitranga foana ny fahasarotan’io asa fanangonana vaovao io. Rariny araka izany raha ho azy no tena anton-dresaka teto.
Tsetsatsetsa tsy aritra: Mampalahelo fa dia tonga hatrany amin’ny fitarihana ny fikambanan’ireo niharam-boina (AV7) tamin’iny andron’ny 7 Febroary 2009 iny ny ady seza (eo amin’Atoa Etienne sy Bona)
Ialàna tsiny ny tsy fisian’ny sary momba ny andro androany 7 Febroary 2010, noho ny antony manokana avy amin’ny mpanoratra
Filed under: politika, tantaram-pirenena, tapatapany, tontolon'ny asa, tsingerina | Tagged: 13 mai, 7 febroary, 7 fevrier, Adno, Ambohitsorohitra, Analakely, Fano, L'Express de Madagascar, Midi-Madagasikara, Rakotondrazaka, RTA, TVM |	Leave a comment »
Lapan’ny tanàna vaovao (tafo)
Posted on 29/12/2009 by gazetyavylavitra
Nisosa tokoa ny asa fanamboarana ilay Lapan’ny tanàna vaovao etsy amin’ny kianjan’ny 13 mai, etsy Analakely. Tato anatin’ny volana vitsy tokoa mantsy dia efa eo ampanafoana azy ity sahady amin’izao fotoana ny orinasa niandraikitra ny fanamboarana azy.
Lapan'ny Tanàna vaovao
Koa raha azo natao tanatin’ny fotoana tsy ela toy izany àry ny fanamboarana azy ity, maninona no tsy tanteraka tany aloha tany? Mampametra-panontaniana ny maro ihany koa ny hoe ‘taiza ny vola? Iza no mpanohana? Inona no tambiny? sy ny sisa tsy voatanisa.
Raha manana hevitra moa ianao momba izay rehetra izay dia mba ampitampitao eto ho fantatry ny maro, nefa aoka mba ho ny tena izy no hivoaka, fa tsy sanatria ho fanosoram-potaka fotsiny ihany. Aleo lavitra aza apetraka amin’ny ‘honohono’ ny filazanao azy raha tsy fantatrao mazava ny fahamarinan’izay ambaranao.
Avy eny Antanintrenina no nakana ity sarin’ny Lapa vaovao andalam-panafoana ity
Filed under: anao ny fitenenana, tapatapany | Tagged: 13 mai, Analakely, lapan'ny tanana |	Leave a comment »
Sahy hitifitra mpanao gazety ve ny RM1?
Posted on 29/03/2009 by gazetyavylavitra
Mpanao gazety sy mpaka sary maro isika ry zalahy no nandrakotra ny andron’ny 28 mars 2009 teo.
Rehefa nidina ho eny amin’ny 13 mai ireo mpomba an-dRavalomanana avy eny Ambohijatovo ka tonga hatraty amin’ny tohotohobaton’Antaninarenina dia natosiky mpitandro filaminana avy aty amin’ny Hotel Le Glacier. Rehefa tonga teny amin’ny manandrify ny BNI Analakely anefa ireo olona marobe, dia nisy tifitra variraraka nataon’ireo tafika avy ao amin’ny RM1 nentina nanaparitahana ny vahoaka.
Rehefa tonga tery ambony manakaiky ny tsangambaton’ny 29 mars 1947 kosa ireo vahoaka sy ny sasantsasany tamin’ireo miaramila avy ao amin’ny RM1 nanosika azy ireo hiala ny faritra, dia efa nigadona tety akaikin’ny BNI indray kosa ireo mpaka sary ny mpanao gazety maro niaraka tamin’ireo mpitandro filaminana avy aty amin’ny Le Glacier.
Nahazendana ny maro ny zavatra nitranga teto satria tsy nampoizina velively: nisy iray tamin’ireo miaramila avy tao amin’ny RM1 izay nivoaka teo amin’ny arabe no tonga dia nanondro basy AHY no sady niteny hoe:
Miala any ny mpanao gazety, Tsy mila mpanao gazety eto. Miala sao tifiriko eo an.
Tsy nahita izay hatao aho no sady nanangana fotsiny ny karatra niantona tety ambozoko. Eo ambony Scooter aho amin’io raha mandeha an-tongotra kosa ny maro tamin’ireo mpanao gazety sy mpaka sary maro namana teny an-kianja mafàna teny. Rehefa hitany fa tsy nihetsika aho no sady mbola nanangana ny karatra tety an-tànako, dia vao mainka niakatra ny feon’ilay ranamana. Tsy haiko na mpifehy ao amin’io toby io ilay zalahy iny, na iza. Fa ny fihetsika nataony aloha no niarahana nahita.
Nisy tamin’ireo mpanao gazety sasany no nihiaka niteny azy nanontany hoe :
Fa hatramin’ny oviana ny mpanao gazety no tsy mahazo maka sary sy manao ny asany. Sa efa niova indray koa ny lalàna?
Namaly ranamana no sady efa nikendry ny lohako. Ny elanelan’ny trottoir roa no manasaraka anay amin’io fotoana io. Hoy indrindra izy:
Rehefa hoe tsy mila mpanao gazety eto dia tsy mila, miala hoy aho sao tifiriko eo. Tifiriko ialahy an!’
Fahatsiarovana sady tsara no ratsy ho ahy iny ry zalahy namana. Kanefa tsy mba voatahiriko an-tsary, fa dia ny nanodina ny Scooter sy ny nidina ambanimbany namonjy ireo mpanao gazety sy mpaka sary sasany no nataoko sisa.
Koa miangavy anareo izay nahazo sary an’iny ‘scène’ iny aho, tena miangavy. Mba omeo sary hotehiriziko, na farafaharatsiny, mba omeo rohy hahafahako mijery azy.
Enga anie ka ho anatra ho an’ireo miaramila rehetra ny namoahako ity lahatsoratro ity, fa aleo hivoaka ny marina sy ny nisy. Izay rahateo no ezahako ijoroana hatrany amin’ity GazetyAdaladala ity.
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: 13 mai, Ambohijatovo, Analakely, Andry RAJOELINA, émeutes, fihoaram-pefy, pro-Ravalomanana, riots, RM1 |	17 Comments »
Fikomian’ny miaramila, araka ny LE MONDE
Posted on 08/03/2009 by gazetyavylavitra
Dika petaka tsy asiana resaka ity:
http://www.lemonde. fr/afrique/ article/2009/ 03/08/mutinerie- dans-un-camp- militaire- a-madagascar_ 1165108_3212. html
Mutinerie dans un camp militaire à Madagascar
LEMONDE.FR avec AFP | 08.03..09 | 15h22
Une mutinerie est en cours, dimanche 8 mars, dans un important camp militaire situé près de la capitale malgache Antananarivo, où des soldats affirment qu’ils n’obéiront plus aux ordres du régime. Les accès à ce camp, le Corps d’armée des personnels et des services administratifs et technique, considéré comme le « poumon de l’armée malgache » et situé dans le district de Soanierana, à environ six kilomètres du centre la capitale, sont bloqués par des soldats mutins.
« Nous ne répondons plus aux ordres de nos supérieurs, nous répondons à notre coeur. Nous avons été formés pour protéger les biens et les personnes, pas pour tirer sur les gens. Nous sommes avec la population », déclare un soldat, sous couvert de l’anonymat. « Le chef d’état-major de l’armée est venu ce matin pour nous amadouer mais il est vite reparti dans sa voiture« ,
Madagascar est plongé dans une grave crise politique née du conflit entre le président Marc Ravalomanana et le maire déchu d’Antananarivo Andry Rajoelina, qui s’est autoproclamé en charge des affaires du pays. Au moins une centaine de personnes sont mortes depuis le début des violences le 26 janvier dans cette île de l’océan Indien. Menacé d’arrestation, l’opposant malgache Andry Rajoelina avait déclaré samedi qu’il était désormais caché en lieu sûr, et avait appelé à un élargissement du dialogue pour sortir l’île de la crise.
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: 13 mai, Andry RAJOELINA, émeutes, démocratie, demokrasia, malgahce, Marc Ravalomanana, militaire, mouvement populaire, mutinerie, riots |	Leave a comment »
Iniana atao ny manindry onjam-peo
Raha mba nanisaka ny onjam-peo aho androany tolakandro, ka nifanitsy indrindra tamin’ny an’ny Radio Viva, dia nihevitra fa ny Viva tokoa io renesiko io.
Nandritry ny ora iray angamba dia hirahira no nalefa tao. Nihevitra ny maro, tahaka ahy koa, fa dia ny tompon’ilay onjam-peo sy ny mpiasa ao no manodina izany Radio izany.
Tsy nampoizina anefa ny zava-misy fa hay ny RADIO MADA no io henion’ny rehetra amin’ny onjam-peon’ny Viva io… Filana ady ve sa fihantsiana no anton’izany?
Amiko mantsy raha tsy te-hanangam-pahavalo ny Radio Mada dia tsy tokony mihitsy hiditra amin’ny resaka fanahy iniana manindry ny hafa toy izany. Mety ho azon’ny rehetra nekena ihany (na tsy an-tsitrapo aza) raha hoe ny RNM no nanindry tao. Sa dia mihevitra ny tsy ho tratry ny aloka tokoa ity Radio Mada ity?
Tsy sanatria fankahalana azy fa sao dia mba tokony harahana ihany ilay tenin-jatovo hoe ‘aleo hilamina dia misesy’. Tsy efa ampy fe ny teny sy antso an-telefona feno fihantsiana sy izao karazana teny fanaratsiana rehetra navoakan’ny Radio Mada hatramin’izao e?
Miandrandra fahatoniana ny rehetra, miantso filaminana ny maro, nefa raha izao tranga izao no jerena akaiky, dia hoy aho hoe, lavitra ny afo ny kitay, raha ny faniriana hahita fihatsaran-javatra no antenaina. Ary ny toy itony dia mbola pitik’afo hampipoaka koa ny vanja, raha ny fihevitro manokana.
Ny feon’ny fandaharana ‘Ny tenin’ny Filoham-pirenena’ no averimberina tao teo amin’ny tamin’n y enina ora hariva teo.
ATSAHARO ZALAHY A! MARINA E , ATSAHARO FA SAO DIA VAO MAINKA HO RATSY NY VOKATR’ITY ATAONAREO ITY. ALEON’NY OLONA LAVITRA AZA MAHENO ILAY KISAOKA MIVOAKA AO AMIN’NY ONJAM-PEO HIONONAN’IZAY MPANDALA AZY SY MPOMBA AZY, TOY IZAY OMENAREO FO AMIN’NY ALALAN’NY FANINDRIANA AZY AMIN’NY ANAREO. MBA SOROHY IHANY IZAY AZO SOROHANA RAHA AZO ATAO, SAO TSY HITONDRA SOA NA HO AN’NY ANDANINY NA HO AN’NY ANKILANY.
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: 13 mai, Andry RAJOELINA, bouillage, fanindriana, mouvement piopulaire, Radio Mada, riots, VIVA |	5 Comments »
Fanambarana goavana nataon’ny Tafika Malagasy androany 08 mars 2009
Nisy antso avo nalefa tamin’ny onjam-peo androany miantso ny miaramila rehetra hiverina any amin’ny casernes daholo, ary tsy hisy handray baiko na avy aiza na avy aiza aloha ‘raha resaka fampandriana fahalenana ny tanana no resahana’. Antsoina amin’izany ny miaramila rehetra, na eto Antananarivo, na any amin’ny faritany, na ireo any ampanaovana mission any koa aza. Ary na iza na iza ka manamboninahitra mandalo fotsiny eto Antananarivo miampy ireo vata-miaramila tsotra, dia antsoina daholo ho tonga eny Andohalo androany amian’ny 12 ora izao antoandro izao.
Rehefa azo ny dika mitovy amin’ny fanambarana dia hadikako ho anareo rehetra eto ihany. Mba ampitampitao ity hafatra ity hiely eran’ny tany sy ny fanjakana, fa zava-dehibe loatra. Satria na ireo miaramila sous-officiers aza dia milaza rehefa eny an-kianja fa efa asa fampihorohoroana izao mitranga izao fa tsy resaka fampandriana fahalemana ny tany sy ny fanjakana intsony. Dia niandry aho ny amin’ny fanambarana, ary dia tonga izy izao ka lazaina.
Raha nampita ity vaovao ity moa ny RADIO ANTSIVA androany antoandro, tonga dia no-brouillé-na avy hatrany tamin’ny 11 h 43mn
Mangataka indrindra aho, ampitampitao ny vaovao zalahy fa izay RADIO mampita izao dia tapahana avokoa. Tsy re intsony ny RADION ANTSIVA manomboka amin’izao amin’ny 11h 44 mn izao.
CAPSAT : tsy nety nivoaka intsony ny antso antso sy iraka nampanaovin’ny chef de corps tao amin’ity camp ity androany ireo sous-officiers. Vaovao marim-pototra io ary dia tsy mety hamono vahoaka sy hanatanteraka baiko intsony izy ireo,fa efa mihoatra ny maha-olombelona sy manala baraka ny tafika hoy izay ireo ny zavatra ampanaovina azy. Sy ny fakàna olona sivily hianjaika ny akanjo miaramila ary alefa hamono olona
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: 13 mai, Andry RAJOELINA, démocratie, demokrasia, militaire, mouvement populaire, refus, riots, tafika |	10 Comments »
Mpanao gazety voadaroky ny mpanakorontana
Posted on 07/03/2009 by gazetyavylavitra
Hita tokoa ankehitriny ny maha asa saro-pady ny asa fanangonam-baovao sy ny fanaovan-gazety. Niainanay rehetra izany androany teny 67Ha. Rehefa tsy nahazo nadalo tamin ‘ny faritra maro teto an-drenivohitra ny filaharana notarihan’i Pierre Andrianantenaina, tohin’ilay antso ho amin’ny diabe, dia nitodika hankeny 67Ha. Talohan’ny nahatongavan’izy ireo teny dia efa nisy ireo nolazaina fa hoe ‘gros bras’, efa nifanolana sy nifanandrina tamin’ny mponina teny an-toerana…
Ny nanahirana tamin’ny zava-nitranga dia ny fifanandrinan’ny olona samy olona ary rehefa tonga teny koa aza ireto nanao filaharana dia niafara tamin’ny fifampitorahana vato izany. Tao anatin’izany rehetra izany dia nisy ny namana mpanao gazety (Sitraka) tonga naka sary teny akaikin’ireto ‘gros bras’ ireto. Efa nisy ihany koa mpanao gazety hafa saiky haka sary teo an-toerana no efa nahazo fandrahonana talohany ka nihemotra sy nampirina hainga ny fitaovana no sady niala ny toerana, lasa namonjy tery akaikin’ny EMMO/NAT. Saingy ry Sitraka sy namana iray hafa kosa tavela sy mbola saiky hanohy ny asany. Nodarohan’ny mpanakorontana ilay mpanao gazety, Sitraka, ary dia vitan’ny sasany mihitsy aza ny saiky hanala ny ainy, tamin’ny alalan’ny fanjerana taminy ireny vy be eny an-tsena ireny. Naratra ranamana no sady voaroba daholo koa ny fitaovana teny aminy. Toy izay koa no nahazo ilay namana iray hafa teo akaikiny teo…
Tamin’ny 5 ora hariva no niala teny izahay mpaka sary sy mpanao gazety rehetra, ary isaorana ny EMMO/NAT fa izy ireo no nitondra anaty tamin’ny camion nivoaka iny faritra iny. Teny amin’ny statistique Anosy izahay rehetra no navela, ary teo koa no samy namonjy fodiana avy eo.
Saingy talohan’ny niakarana tao anaty camion dia mbola nisy iray taminay ihany koa no nisy nibeda ary dia voaendaka daholo na portefeuille nisy ny vola sy kara-panondro, na ny fitaovana fiasana.
Fa tonga teny Nanisana kosa nitondra fanampiana ho an’ireo sahirana sy nanao asa fanadiovana tanàna ny PDS notendren’ny fanjakana Guy Rivo Andrianarisoa
Vaovao voaray izao vao izao:
Tafiditra ao anaty Station VIVA ny EMMO/NAT amin’izao amin’ny 8 ora sy 23 mn izao. Efa tsy misy olona intsony anefa tao anatin’ity trano ity. Raikitra ny fandefasana grenady mandatsa-dranomaso handravana ny andrimasom-pokonolona. Ary misy fanamarihana nataon’ny mpanao gazety nanatrika ny zava-nitranga teny fa nisy olona sivily nentina niditra tao anatin’ity tranon’ny INJET ity. Tsy fantatra hoe iza, hanina, hatao inona, sns…
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: 13 mai, Andry RAJOELINA, émeutes, mouvement populaire, riots, VIVA |	Leave a comment »
Fisamborana an’i Andry Rajoelina
Posted on 06/03/2009 by gazetyavylavitra
Omaly alina tamin’ny 10 ora sy sasany teo ho eo no saiky hotanterahana ny fiosamborana an’i Andry Rajoelina. Niaraka tamin’ny camion avy ao amin’ny fivondronana ny EMMO/NAT ka ireto voalohany no nasaina nanala sakana (fitoeram-pako). Ry zareo kosa nijanona lavidavitra.
Nahita izany ny mpiambina an’i Andry Rajoelina ka nivoaka nanontany ny antony. Nalana ny rivotra tao anatin’ny kodiaran’ny camion ,ary voasambotra ny telo tamin’ireo tao anatiny.
Nisy basy ni^poaka tsy nahy anefa tao anatin’ireto EMMO/NAT ireto ka nifandratra izy samy izy tao ry zareo. Noheverin’ny tao an-tanana fa natao ho azy izany poa-basy izany, ka dia mba nampanenoiny koa ny azy.
Mbola hitan’ny mpanao gazety (izay afaka nankeny) teo amin’ny arabe moa ny ran’izay voan’ilay poa-basy tsy nahy (Vokatry ny hoe olona tsy havanana, na tsy natao hitam-basy ve izany? Asa!)
Lasa nitsoaka moa ireto miaramila ireto rehefa nitranga izany rehetra izany.
Fa taorian’izany kosa dia napetraka amin’ireo sampanana rehetra mitondra ho any Ambatobe ny sakana.
(Source RADIO ANTSIVA Fm 97.6)
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: 13 mai, Ambatobe, Andry RAJOELINA, mouvement populaire, Radio Antsiva, riots, VIVA |	4 Comments »
Gidragidra be androany 04 martsa 2009
Posted on 04/03/2009 by gazetyavylavitra
Nangidihidy ny tanako ka dia tsy maintsy nanoratra sy nandeha nitady fitaovana indray hakàna sary ho anareo mpamaky. Fa nisy inona tokoa ary e? Tsenan’Andravoahangy rehefa Alarobia. Tsy zava-baovao amin’ny maro intsony araka izany ny mahita fitohanan’ny fifamoivoizana amin’iny faritra iny. Niasa toy ny andavanandro araka izany ny mpiasa, ny mpivarotra nivarotra. Samy nanao ny nataony izany e! Mbola sondriana teo ampototry ny solosaina fampiasana andavanandro iny aho no indreto ny mpiara-miasa niditra tampoka tao amin’ny birao ary samy namonjy ny lavarangana avokoa. Misy lavarangana mitodika any amin’ny arabe mantsy ny rihana faharoa misy ny birao.
Fa misy inona ary e?
Olona manao dia maika sy hazakazaka madinika no tsinjo avy ety ambony, nanaraka izany dia indreny fiara vitsivitsy nitodi-doha niverina ho any Andravoahangy, raha toa ka ny ho an’ny afovoan-tanàna no anton-diany. Lasa laharan-droa vetivety teo ny fiara miverina ho any Andravoahangy. Tsy naharitra ny tena ka dia lasa koa mba nidina nanangom-baovao. Tokony ho tamin’ny 10 ora teo ny andro tamin’io. Nandeha nijery ifotony ny raharaha ny tena, ka namonjy nidina tany Behoririka. Tonga teny akaikin’ny rano maimbo (Lac de Behoririka). Olona maromaro no nivorivory teo ambony sy ambanin’ny tetezana
hatreny ambany eny, ary tery ambony amin’ny làlana mankany Soarano sy Analakely kosa ireo Emmo/Nat (miaramila ahitana Zandary, polisy, tafika). Ireto olona avy ety ambany manakaiky ny rano maimbo no mihantsy iretsy miaramila manoloana azy. Misy eo amin’ny 200 m mahery eo ny elanelana manasaraka ny roa tonta. Avy eo nivadika ho tora-bato izany….
Niverina nankany amin’ny birao aho nanafatra fakàn-tsary sy naka akanjo. Naka ny zanako tany ampianarany aloha (eo ampitan’ny birao ihany ny sekoly), ka rehefa avy nanatitra azy tany an-trano (tsy lavitra fa ao ambadika ao koa) dia lasa amin’izay handeha hanangona ny zava-misy sy handrakitra izany an-tsary. Efa amin’ny 1 ora sy fahefany ny andro raha naka ny sary voalohany teo Behoririka aho. Avy eo kosa nanohy ny diako nankany Antaninandro manda-pahatonga tany akaikin’ny College de France sy ny “Planète” (Hotely eny Ambohijatovo mifanolo-bodirindrina amin’ny College de Fr.). Nangina be ny tsy nahenoana feo-na fiara ny làlana rehetra nolalovako, saingy feno olona mifanaretsaka kosa. Eny rehetra eny ihany koa anefa dia ahitana miaramila sy zandary mitam-basy sy baomba mandatsa-dranomaso. Tany foana sy malalaka sisa ny teny Analakely raha nalaiko sary avy ety amin’ny làlana midina ho any Ambohijatovo.
Miaramila vitsivitsy sy ny fiarabe mpitatitra azy ireo no tsinjonao eny. Nanempotra ny fofona baomba mandatsa-dranomaso raha vao tafakatra kely teo amin’ny Eglizy Katolika Faravohitra fotsiny. Mitampim-bava sy orona daholo izay olona mifanena amiko. Ao ireo sakodiavatra mitady izay lalan-kaleha hamonjena fodiana, satria feno sakana ny làlana (na io ataon’ny mpihetsiketsika, na io ataon’ny mpitandro filaminana).
Rehefa tonga teny Ambohijatovo dia namonjy avy hatrany ny toerana misy ny Emmo/nat sy ny mpaka sary namana no natao. Teo anoloan’ny College de France sy ny tery ampitany manamorona ny tambohon’ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena.
Teo no nisy ny sakana iray nataon’ny Emmo/Nat, ary ny sasany tety ambodi-fiakarana miverina mankany Faravohitra (eo ambanin’ny fiangonana Advantista Mandrosoa).
Ireto teo ampototry ny fiakarana dia toe ry zareo avy ao amin’ny RM1 raha ny fahitako azy. Efa taty aoriana kely vao nisy Emmo/Nat nanatevin-daharana azy ireo…
Raha mijoro fotsiny mijery sy tsy nanao na inona na inona afa-tsy ny niandry no nataon’ny Emmo/Nat, ireo tanora entanin-kafanam-po diso tafahoatra tery ampita kosa dia tsy nitsahatra ny nanao fihantsiana sy nitora-bato. Ary tsy vato kely fa tena mafonja an! Tsy fantatro hoe taiza no nahitan’ireo andian-jatovo ireto kodiarana ho dorana fa nisy roa tamin’izany no nampirehetin’izy ireo ary nalefany nikodiadia nakeny amin’ireto mpitandro filaminana…
Ny tany, hono, tsy ilaozan’adala ka nisy tamin’ireto andian-jatovo ireto no niditra tany anelanelan’ireo tranohazo marobe fivarotam-boky eo Ambohijatovo, ary dia tonga metatra vitsivitsy teny akaikin’ny mpitandro filaminana mihitsy manipy ny vatony. Tsy very anjara tamin’izany koa izahay mpaka sary sy mpanao gazety. Tsy nisy tohina kosa anefa na izany aza…
Mifanampy moa ny mpitandro filaminana sy ny mpanao gazety teto tamin’ny fanoroana ny fiavian’ny tora-bato sy ny fisian’ny olona tany anelanelan-trano tany. Raikitra ny fandefasana tifitra baomba mandatsa-dranomaso nankao anatin’ny faritry ny tranohazo tao, ary koa ny fandrahonana ireo andian-jatovo tsy hanohy hietraketraka.
Nefa toa herim-po very maina izany. Toa izy ireo indray aza no be vava ka manao hoe
“Raha izay feom-basy letsy efa mahazatra anay a! Raha lehilahy dia tifiro » , sady atondrotr’izy ireo mankany amin’ny mpitandro filaminana ny vodiny [azafady fa mivantana be iny].
Rehefa hita fa naneho fahasahiana saiky hanantona ny mpitandro filaminana ireo antokon’ny mpitora-bato avy tery akaikin’ny fiatoan’ny taxibe avy any Ankatso, dia nanomboka ny fandefasana tsy ankiato ny baomba mandatsa-dranomaso. Nahazo ny anjarany tamin’izany koa ireo sampany avy aty amin’ny fiakarana mankany Ambatonakanga (FJKM) …
Elaela ny fifanatrehana teo ary farany dia niroso nanatona ireto andian-jatovo ireto ny Emmo/Nat no sady nandefa baomba mandatsa-dranomaso hatrany. Voatosika nihazo ny Tunnel Ambanidia ny antokon’olona nanoloana ny tobin-dasantsy eo ambanin’ny tranoben’ny Minitseran’ny Mponina.
Ary ireo avy ato ankavanana amin’ny fiakarana mankany Ambatonakanga koa dia voatosika nihemotra lavitra tery ambony tery.
Toraka izay koa ny avy ao amin’ny toby fiantsonan’ny taxibe mankany Ambohipo, Mandroseza sns …iny.
Tena nampihaiky volana ahy, ary nahazendana ny mpitandro filaminana koa ny fahasahian’ireto andian’olona ireto, satria raha voatosika ny tety amin’ny arabe, dia nisy kosa tamin’ireto olona ireto tafiditra tao anatin’ny kianjan’Ambohijatovo. Raha variana amin’ireo olona marobe nanoloana azy ny mpitandro filaminana, dia nisy olona kosa nivoaka teny ambaravarankelin’ny trano iray teo akaikin’ny toby famatsiana solika teo, ka niteny tamiko fa misy manomana cocktail Molotov ao an-jaridaina. Avo toerana moa ry zareo ka tsy nahagaga raha tsinjony tsara daholo izay nitranga tao an-kianja. Rehefa ren’ireo mpitandro filaminana izany dia efa niomana hiatrika izay koa ry zareo. Niezaka naka sary an’ireo telolahy nandady nitondra ilay tavoahangy feno lasantsy aho, saingy tsy nahasehaka loatra ilay fakantsary sinoa tety amiko ka dia ny vodi-poteau niafenan-dry zalahy no tratra farany.
Ry zalahy amin’izay mandady amin’iny sisin’ny fefin’ny zaridaina iny mba hanatona ireo mpitandro filaminana, ka rehefa nahita ny lohako nitsofoka tamin’ireo lavaka boribory amin’ny fefy mba haka sary azy ireo, dia iny koa ry zalahy no lasa nihemotra…
Toy ireny manao sarin’ady ireny no fihevitr’ireto andianolona ireto ny zava-mitranga. Tsy mitsahatra koa ny tora-bato mandritra izany rehetra izany.
Fa izay zavatra tena hitako ho nanahirana tokoa an’ireto mpitandro filaminana ireto dia ny fidiran’ireto andian’olona ireto tany an-tananan’olona, ary avy any ry zalahy no mitoraka vato na tavoahangy sy izay rehetra azo atsipy. Avy any ambadiky ny trano, ka manelanelana azy ireo amin’ireto miaramila amin’izany ny tafon-tranon’olona nidirany. Avy any ambadika any no misy manipy seau plastika sy daba vy voasesika zavatra nampirehetina, ary natsipy ho aty amin’ireo mpitandro filaminana.
Teo amin’ny sampanana mankany Ambatonakanga sy Antaninarenina izany no niseho. Hitoraka grenady an-dry zalahy ny mpitandro filaminana, toa sahirana ihany, satria tanànan’olona no ao, ary tsy fantatra izay mety hitontonan’ilay zavatra.
Fa ny tena nampalahelo dia ny fanimban-javatra.
Ankoatra ny fanimbàna ny tohotoho-bato teo akaiky teo mba hahazoana vato hitorahana ny mpitandro filaminana, dia nisy fiara niantsona tery amin’ny fiakarana ho anyAmbatonakanga iny (Peugeot 404). Tapitra novakian-dry zalahy ny fitaratry ny fiara mba hahazoany manala ny tsindry hisatra taminy. Avy eo dia nasosany nidina tamin’iny fidinana iny ilay fiara mba ho ety amin’ny mpitandro filaminana. Soa ihany fa nisy vato namily tampoka ny kodiarana, ka tany amin’ny rindrina amin’ilay trano avo teo antenantenam-piakarana teo ilay fiara no nifatratra. Goavana ny fahavoazana hita amin’ilay fiara…
Ireo faritra avo rehetra nanodidina an’Ambohijatovo dia saiky feno olona avokoa.
Ary ny lalàna rehetra miditra mamnkao Analakely dia nisy sakan’ny miaramila avokoa ary tsy azo nodinganina. Hatramin’ny fotoana nanoràtana ny hafatra ( 5 ora hariva sy sasany) dia mbola re foana ny poa-basy tety amin’ny faritra Andravoahangy. Tonga hatraty ambony tafon’ny lakozianay ny pitika baomba mandatsa-dranomaso. Nandositra eraky ny elakelan-trano ry zalahy, hatrany amin’iny mankany amin’ny ACCEM sy miakatra any amin’ny tranon’i RAIMBOAY any Mandialaza iny, ary dia ampolony indray no saiky hiditra tato an-tanana. Iray no efa tato anaty tokotany ka rehefa noroahana nivoaka nefa tsy nety, dia voatery notorahana kapila avy tany amin’ny terasse… Tezitra tamiko ny mpiara-manofa tato an-tanàna fa hoe sao anànan-dry zalahy kakày, hono, ny tanàna. Ka mba leo koa aho aloha e! Tsy te-hahita toy ilay tamin’ny 27 janoary intsony.
Saiky hadinoko, fa nisy teratany vahiny miteny anglisy be enina, tsy fantatro izay fihaviany fa lazain’ny namana mpaka sary sasany fa SudAf, nalain’ny mpanao gazety namana iray sary (fotsy be ry zalahy ireto teratany vahiny, ary izy ireo, hoy ny Tv Plus androany, no tena mibaiko) . Nezahana nalaina ny fitaovana fakàna sary teny amin’ilay ranamana mpanao gazety, ary rehefa ela nifandroritana sy nifamaliana teo dia afaka nanohy ny asany ihany ilay namana. Heno mihitsy tao anatin’ny horonantsary tamin’ny fahitalavitra io hariva io ny baiko nomen’ilay mpitarika gasy hoe
alaivo ‘lay sary, alaivo fotsiny lay cam
. Nolazain’ny EMMO/NAT fa hoe touriste moa ireto vahiny ireto, ka dia gaga sy sorena ny mpaka sary sy mpanao gazety rehetrahoe, fa rehefa vahiny izany dia afaka manitsaka zone rouge (ny 13 mai zay efa feno miaramila hatramin’ny vao mangiran-dratsy, ka tamin’ny valo ora maraina dia tsy nisy afa-tsy ireo fiara hivoaka ny faritra sisa no afaka nandeha, fa izay nihevitra ny handalo na hivezivezy tao dia tsy afaka nanao izany), fa rehefa Malagasy miezaka manao ny asany amin’ny fanaovan-gazety dia TSIA. Niteraka fahasorenana sy fifanazavana lavabe teo amin’ny andaniny sy ny ankilany izay, ary dia niseho mazava tsara tao main’ny fahitalavitra MaTV io hariva io. FA KOSA… FA KOSA… Nalain’ity olona tsy miteny Malagasy ity sary ilay ranamana mpanao gazety ( iniana tsy lazaina eto aloha ny gazety iasan’ilay ranamana anio!). Tsy fantatra hoe sary hatao inona. Saingy eto izany dia efa miomana sahady ireo namana rehetra mpaka sary sy mpanao gazety fa raha sanatria misy mahazo izay ranamana izay, dia efa fantatsika ny fiavian’ny olana. Fiaran’ny miaramila mitondra ny laharana T 1935 moa no tonga naka ireto teratany vahiny enina ireto niala ny kianjan’ny 13 mai.
Nisy moa ny fisamborana na teny amin’ny Petite Vitesse Isotry, na teny Ambohijatovo sns…
Fa raha ny tetika nentin’ireo mpitandro filaminana nitsimpona ny mpitora-bato (izay tsy nampoizin’ireto farany velively) no lazaina dia toy izao. Rehefa nifanao fangala-piery ela teo ny roa tonta, ary tsy nahita haleha intsony ireo mpitoraka sasany, dia mody mandeha mora toy ireny olona tsy nanao na inona na inona ireny. Miroso miadana manatona ireo sakana miaramila. Rehefa tonga eo amin’ny sakana kosa anefa,dia raikitra ny fisavana tànana, ka izay rehetra maloto tànana, toa feno biriky, na vovo-bato, dia tsy afa-bela fa raisim-potsiny eo.
Fa teny an-dàlana nody dia tsinjoko fa tena mbola tomefy olona teo anoloan’ny Luxor Behoririka, ary efananomboka niakatra nanatona azy ireo koa ny EMMO/NAT avy any ambany any.
Ilaozana kely aloha ny eny Ambohijatovo, fa ndeha hotsiahivina kely ny teny Antanimena (C.E.G): niditra nanao barofo tao ireo mpanao fihetsiketsehana. Nanakorontana ny mpianatra rehetra tao sy nanao herisetra tamin’ireo mpanabe. Nisy mihitsy aza ny olona tao amin’ity toeram-pampianarana ity no naboridan’ireo mpanakorontana, Kiakiaka sy tomany no nanakoako avy tao amin’ity C.E.G ity raha ny tatitra voaray, satria mbola tao daholo ireo mpianatra marainatamin’ity sekoly ity. Soa ihany fa tsy isan’ireo mpianatra maraina ny zanako androany.
Fa raha toy izao kosa aloha no lazaina hoe tolona, dia hoy aho heo SIMBA TANTERAKA ARY TOKONY HOVANA ANY ANATY RAKIBOLANA NY HEVITRY NY TENY HOE “TOLONA”, ka asiana dikany iray faharoa hoe “FANDROBANA SY FANAOVANA AN-KERINY NY HAFA”. Miala tsiny raha masiaka fiteny fa raha ny zavatra hita androany, dia tsy voafehy mihitsy ireo olona nihetsika nanerana an’Antananarivo.
Fa nihaino Antsiva aho io hariva io (6ora sy 53 mn). Raha mbola miteny tsara manazava hevitra iny ingahy Ismael Razafinarivo, tonga dia ny feo avy amin’ny Radio Mada no niditra tampoka nanindry ilay onjam-peon’ny Antsiva (antso an-telefona fanakianana ranofotsiny ny hetsika ary fiantsoana ny fanjakana handray andraikitra no tao), ka nahatonga ireo tao amin’ farany hanapaka haingana ny onjam-peo. Nilaza moa ireo olona sendra tafaresaka tamiko fa isak’izay mamadika sy mitady onjam-peo ianao, dia ny Radio Mada no azonao…
Feno mpitandro filaminana eran’ny tanànan’Antananarivo. Asa izay mbola hitranga anio halina
8 no niditra hopitaly, miaramila ny iray, lehilahy lehibe jamba ny iray izay isan’ireo naratran’ny tora-bato. Roa tamin’ireo kosa ratra vokatry ny tifitra. Tatitra avy amin’ny HJRA nampitain’ny MaTV ireo.
Fa nasehon’ny TvPlus kosa fa nisy iray maty androany nandritra iny fifandonana iny. Mpivaro-boanjo mandehandeha no asany ary Haja no anarany, araka ny fanazavan’ny dadatoany. Roa ireo voatifitra teo amin’ny kibony ary nipotsaka ny tsinainy. Isan’izany ity maty ity. Hatreto kosa anefa dia tsy nahazoana fanamarinana na bala tena izy na tsia no nahavoa ireto olona ireto.
Hatramin’ny 7 ora hariva teo dia mbola mihidy eny amin’ny Hotely Le Hintsy ny solontenan’ny roa tonta sy ireo mpanelanelana manao fivoriana. Tsy hisy moa ny famintinana ho an’ny mpanao gazety amin’ity anio ity raha ny hafatra voaray nampitondraina mpiasa iray ao amin’ity Hotely ity.
Mbola niantso tamin’ny alalan’ny finday sy nalefan’ny TvPlus izao hariva izao ny antso nataon’i Andry Rajoelina nilazany fa mbola mitohy ny hetsika sy fiezahana hirotsaka ao amin’ny 13 mai rahampitso (amin’ny 8 ora sy 30 mn alina izao aty Madagasikara)
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: 13 mai, Andry RAJOELINA, émeutes, démocratie, demokrasia, EMMO/Naa, gidraka, mouvement populaire, riots, VIVA |	2 Comments »
Posted on 03/03/2009 by gazetyavylavitra
Efa andro maromaro izao no nahamarika ireo rehetra mpanaraka ny onjam-peo samihafa eto Antananarivo sy ny manodidina azy fa mavaivay tokoa ny adin’onjam-peo (geurre de communication). Samy mamely sy manovokvoka ny ankolafy raisiny ho fahavalony daholo ny andaniny sy ny ankilany.
Fa izay nahavalalanina ny maro dia ny nahatsikaritra fa iharan’ny « brouillage be mahatsiravina » ireto onjam-peo roa ireto : 97.6FM (ANTSIVA) sy ny 98.8 (VIVA Radio). Somary nisy ihany koa izay « sarintsari »-na brouillage izay tamin’ny onjam-peo 100.8 FM.
Nilaza ny hiezaka hitady izay fototr’izany ny ao amin’ny Radio Antsiva ary hanao « silence Radio » aloha rahampitso tontolon’ny andro. Holazainy amin’ny Alakamisy ihany izay vokatra, na koa tsy fahitam-bokatra, aorian’izay Alarobia tsy miloa-peo izay.
Ny zavatra mahagaga tokoa amin’izy ity raha mihaino ny 100.8 FM ianao, dia tsy mitsahatra isan’andro ny fandraisana antsi an-telefona ao amin’io Radio iray io, ary dia tsy zava-baovao amin’ny sofinao intsony ny mihaino fanaratsiana isankarazany ao. Izany hoe rehefa tsy heno ny VIVA dia ny 100.8 FM (Radio MADA) indray no manao ny ataony. Efa ela kosa ny 97.6 FM no nanapa-kevitra, mba ho fisorohana ny mety ho fihoaram-pefin’ireo mpiantso, fa tsy hampiditra antso an-telefona mihitsy aloha. Fanadihadiana no entin’ingahy Ismael Razafinarivo ao isan’andro. Fanadihadiana izay tsy hitako velively hoe mitongilana ho an’iza,na ho an’iza. Nefa dia izay no zavatra zakaina. Brouillé-na ny onjam-peo. Fa inona tokoa moa izany no atahorana ka tsy ahasahian’ny fanjakana mandray fanapahan-kevitra toy ny nataony tamin’ny VIVA Radio raha ity resaka Antsiva ity no dinihana akaiky? Misy tombon-tsoan’iza amin’ny fanaovana brouillage? Sa misy iza atahorana ao amin’ny Antsiva? Ary maninona no tsy misy fepetra raisina momba ireo antso an-telefona maro miendrika fihantsiana ao amin’ny 100.8 FM? Sa ve satria an’ny tompony io?
Angamba izay deux poids, deux mésures izay foana no efa fototry ny olana ka tokony hialàna.
Fa tsetsatsetsa tsy aritra no hilazako vaovao iray sendra mba reko tao amin’ny TV Plus Madagascar. Nilaza, hono, ireo mpaisan’ny TvM sy RnM fa mbola manohy ny asany tsara tokoa, SAINGY, ny fanomanana no atao etsy Anosy, fa avy eo kosa dia tsy maintsy alefa any Iavoloha daholo aloha ho sivanina. Any rahateo no foibe iaingan’ny TVm sy ny Rnm, raha araka ilay vaovao ihany.
Mbola tsetsatsetsa tsy aritra ihany koa no iaingan’ny fanontaniana raha sendra mba nahatsiaro ny « Sabotsy mihoson-drà » ny tena, Fa mba nankaiza ny Jeneraly Dolin Rasolosoa e? Toa tsy re na henoheno intsony taorian’ireny?
Ary tsetsatsetsa farany ny hoe, dia ahoana indray izao hoy i Mgr Odon Razanakolona momba ity pao-basy sy fisamboran’olona sy fandefasana grenady mandatsa-dranomaso eran’ny tanana ity? Tafiditra tao anatin’ny fepetra napetrany talohan’ny niverenany ho mpanelanelana indray mantsy ireo. Ny hariva teo mantsy dia nijanona an-dàlana mihitsy aho nony tonga teo Ambohimiandra (avy any Mandroseza aho tamin’io). Feno fiara mijanona ny sisin-dàala, ary feno tànana manondro mankany Ambohipo any. Dia mba nijanona sy nitopy tany koa ny tena. Setroka mainty ery an-tampon’Ambohipo, akaikin’ny tampom-piakarana sy aty amin’ny ambany indrindra no tsinjo Ary ankoatra izay dia setroka manga ihany koa (somary manify izany ilay izy). Tsikaritra eny an-tampon-kavoana sy eny ambony tafontrano eny koa ny olona maro (manaraka akaiky ny raharaha sa mandositra ny gidragidra? Tsy haiko)
Fanontaniana saro-baliana ny mbola hitranga rahampitso Bàba a! Toa tratry ny « Silence Radio » hatramin’ny mpanelanelana sy ny sisa mantsy e!
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: 13 mai, brouillage, démocratie, demokrasia, Dolin Rasolosoa, mouvement populaire, Odon Razanakolona, Radio, riots, RNM, TVM, VIVA |	2 Comments »